‘झोले’ले गर्‍यो दुईदिनमा ४२ लाख कलेक्सन « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘झोले’ले गर्‍यो दुईदिनमा ४२ लाख कलेक्सन
अनिल यादव। शुक्रवारबाट देशभरका ७० सिनेमा हलहरुमा प्रदशर्न भइरहेको नेपाली डार्क कमेडी चलचित्र ‘झोले’ ले दुईदिनमा ४२ लाख ग्रस कलेक्सन गरेको छ । राजधानीबाट २८ र मोफसलबाट १४ लाख गरी कुल ४२ लाख पुगेको चलचित्र टिमले जानकारी दिएको हो ।
‘नेपाली सिने बजारमा ‘झोले’ के हुदैछ त भन्ने जिज्ञासामा चलचित्रका निर्देशक दिपेन्द्र के. खनालले भने –‘ चलचित्रको ‘वर्ड अफ माउथ’ एकदम बलियो छ , सिनेबजारमा यसले ‘ब्लाष्ट’ गरिरहेको छ । ’ उनले आत्मविश्वासी हुदै थपे–‘ शुरुवाती प्रतिक्रियालाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो चलचित्र ३–४ हप्तासम्म मज्जाले चल्नुपर्ने हो । ’ आइतबारको कलेक्शन भने बेलुका मात्र थाहा हुने पनि उनले जानकारी दिए ।
थिएटरबाट ठुलोपर्दामा छिरेका बहुप्रतिशाली कलाकार दयाहाङ राई, चर्चित अभिनेत्री प्रियंका कार्की र ए. गुरुङ को चलचित्रमा मुख्य अभिनय रहेको छ । चलचित्रमा दयाहाङ विदेश जान लागेका युवाको भुमिकामा देखिन्छन् प्रियंका पार्टटाइम यौनकर्मी रहेकी छिन् । दयाहाङको अभिनयले चलचित्रलाई विशेष बनाइदिएको अधिकांश दर्शकहरुको प्रतिक्रिया छ ।
राजधानीमा पपकर्न र मोफसलमा एफडी सिनेमाले चलचित्रको वितरण गरेको यस चलचित्रलाई टेकेन खड्काले निर्माण गरेको हुन् ।